Dị njikere ịme oriri ọzọ: Champagne na-ere ahịa na-edobe ndekọ ọhụrụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Mmanya & mmuo » Dị njikere ịme oriri ọzọ: Champagne na-ere ahịa na-edobe ndekọ ọhụrụ
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • culinary • omenala • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • Akụkọ okomoko • News • ndị mmadụ • Ịzụ ahịa • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Mmanya & mmuo
Dị njikere ịme oriri ọzọ: Champagne ahịa na-edobe ndekọ ọhụrụ.
Mkpesa a na -eme ugbu a n'ahịa Champagne zuru ụwa ọnụ nwere ike ịkwalite ahịa na karama nde 305 n'ụwa niile na 2021, ọnụ ọgụgụ ikpeazụ a hụrụ na 2017.
Otu Champagne gbadara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasenti 18 n'afọ gara aga ka mbelata nke 2% na 2019.
Dabere na mmụba ugbu a, a na-atụ anya ire champagne ga-eto ihe dịka 4% n'afọ a, ma na-aga n'ihu na-emekarị site na 2025.
Ahịa Champagne n'etiti Jenụwarị na Ọgọstụ rịrị elu 11.9%, ọbụlagodi ma e jiri ya tụnyere otu oge ahụ na 2019 tupu oria ojoo.
Dị ka French champeenu mmanya growers n'ọnụ ụlọ NGG, Champagne ahịa na-aga n'ihu iru elu afọ anọ n'afọ a, ekele maka mbupụ mbupụ na United States na Australia.
Ire ahịa na-arị elu na-arị elu, na-alaghachi na mpịakọta ikpeazụ a hụrụ tupu ọrịa ọrịa coronavirus zuru ụwa ọnụ na mkpọchi na-esochi zigara ahịa mbelata, ebe amachibidoro ndị mmadụ ịwụ oriri.
Champagne Ịre ahịa n'etiti Jenụwarị na Ọgọst gbagoro ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 12%, ọbụlagodi n'otu oge ahụ tupu oria ojoo 2019.
N'oge ahụ, ụlọ champagne French butere karama nde 297.6 n'ụwa niile. Na 2020, agbanyeghị, mpaghara ahụ bugara naanị karama nde 244, dịka data sitere na ndị otu azụmaahịa Comité Champagne. Ntughari maka mpaghara a, nke bụ ụlọ ọrụ mbupụ nke abụọ kacha ukwuu na France mgbe ikuku ikuku gasịrị, gosipụtara mfu na uru $ 980 nde.
"Ụdị a gbadara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 18% n'afọ gara aga ka mbelata nke 2% na 2019," onye nyocha sitere na International Wines and Spirits Record (IWSR) sitere na UK gwara CNBC, na-ehota ọnụ ọgụgụ nyocha ahịa ahịa mmanya mmanya. Ugbu a, dabere na mmụba dị ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ na-atụ anya Champagne ire ere na-eto ihe dịka 4% n'afọ a, ma gaa n'ihu na-emekarị site na 2025.
Amụma nke French General Syndicate nke Champagne Winegrowers na-enwekwu nchekwube. Otu a na -atụ anya na ngagharị iwe ugbu a n'ahịa Champagne zuru ụwa ọnụ nwere ike ịkwalite ahịa na karama nde 305 n'ụwa niile na 2021, ọnụ ọgụgụ ikpeazụ a hụrụ na 2017.
Ụfọdụ ndị ọkachamara kwenyere na ndị mmadụ na-adịla nnọọ njikere ịga oriri ọzọ ka ha nọrọ ihe karịrị otu afọ kpọchie.
"Ọ bụrụ na m ga-eche, echere m na ndị na-azụ ahịa dị njikere ime ememe ọbụna obere ihe dị na ndụ," Natalie Pavlatos, onye na-ekwuchitere ụlọ ọrụ Champagne nke US, gwara CNBC. Ọ bụ ezie na oge ezumike ka na-aga n'ihu, Pavlatos na-ekwu na ụlọ ọrụ ya na-enwetarị akụkọ banyere ahịa ndị dị elu karịa nke afọ gara aga.
Pavlatos kwuru, "Ya mere, anyị nwere ike na-ahụ ọ bụghị naanị nlọghachi na nkịtị kamakwa arụmọrụ ka mma karịa ka anyị nwere na 2019."